Inhlanganisela Yemibala Yasekhaya
I-mistcops.com iyiwebhusayithi enhle kakhulu enikezela imininingwane mayelana nokwakhiwa kwemibala ngaphakathi kwesithombe ngokuzenzakalela uma usilayishe ithuluzi lokukhetha imibala. Le webhusayithi iqukethe imibala engaphezu kwe-80 futhi ungakuthola kunzima ukunquma umbala othile ngaphakathi kwesithombe. Ngokuzenzakalelayo, i-costcops.com yethule ithuluzi lokukhetha imibala ongalisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi lapho ufuna.
Uma uhambisa futhi ulayisha ngethuluzi eliku-inthanethi, kuzolayisha ukucubungula ukuthola uhlu lwemibala ngaphakathi. Ngemininingwane, imiphumela iqukethe imininingwane ethile ewusizo efana nesithombe sombala, i-HEX, i-RGB, kanye negama lombala. Lesi yisiza esihle njengoba ungabona inqwaba yemibala ngemizuzwana ngokusebenzisa ithuluzi. Ngakho-ke, Jabulela ukuhlola imibala efihliwe kugalari yakho yezithombe.
Le webhusayithi ikhombisa izinto eziningi ngombala kini nonke. Ngokuchofoza okukodwa kule webhusayithi, ungathola izithombe eziningi ozifunayo. Nakhu okunye okuqukethwe ongakuthola
Ngoba eyodwa imayelana nombala. Kunemibala eyisisekelo, inhlanganisela yemibala, usayizi wemibala negama lombala. Umbala oyisisekelo unemibala emithathu, kukhona obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka ophuzi. Ukusuka kumbala oyisisekelo, ungathola imibala yenhlanganisela eminingi ekuphefumulele nonke, okungukuthi imibala yesibili. Isibonelo, inhlanganisela ebomvu nphuzi izokhiqiza umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukuhlanganiswa okuphuzi nokuhlaza okwesibhakabhaka kuzokhiqiza umbala oluhlaza, bese kuthi okokugcina kube bomvu futhi okuhlanganisiwe okwesibhakabhaka kuzokhiqiza umbala onsomi.
Ngenkathi enye inhlanganisela yemibala izokhiqiza umbala ongaphezulu kwezigidigidi. Umbala uhlukaniswe waba ngamaqembu amabili, okungukuthi imibala efudumele nemibala epholile. Imibala efudumele ingumphumela wokuphela kwemibala ebandayo. Imibala efudumele yenza izinto zibukeke zinzima futhi ziminyene. Imibala efudumele ibomvu, orenji, igolide kanye nsundu. Ngenkathi umbono wombala opholile wenza izinto zibukeke ziqabula futhi ziqhakaza. Okuhlanganisiwe ngemibala epholile kuluhlaza okotshani, onsomi nokukhanya okwesibhakabhaka.
Ukuhlanganiswa kombala kuwumphumela wobuciko bomuntu kanye nemicabango. Imibala ehlukene inombono ohlukile kumuntu. Ukuxutshwa kombala kwenza impilo ibe ntle futhi ibe yinhle ngokwengeziwe. Ngaphezu kwalokho, inhlanganisela yemibala ingakhiqiza umbala omangalisa kakhulu. Ungafaka ukuhlanganiswa kombala ezintweni ezisizungezile, njengodonga, umbala wefenisha, imibala yokukhetha izingubo, imibala yokudweba, umhlobiso njll.